Warmurtiyeed: Shirweynihii amniga ee Muqdisho lagu qabtay 20-23 April 2014 – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
25th April 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay intii u dhaxeysay 20-23kii bishaan April 2014 shirweyne looga hadlay xoojinta amaanka, kaasoo dowladda Soomaaliya soo qabanqaabisay, waxaana dhamaadkiisii laga soo saaray war-murtiyeed u qornaa sidan:
Shirweynaha Xoojinta Amniga Qaranka
Shirweynaha Xoojinta Amniga Qaranka, waa shirweyne Soomaaliyeed oo looga gol leeyahay xoojinta iyo kor u qaadida amniga qaranka iyo hay’daha amni ee dalka ka hawlgala, shirweynahan oo soojeedintiisa ay lahayd Wasaaradda Amniga Qaranka oo uu horkacayo Wasiirka wasaaradda, islamarkaana ay ku waafaqeen Ra’iisal Wasaaraha iyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay hotel Jaziira, Magaalada Muqdisho, muddadii u haxeysey 20kii-23kii Abriil 2014ka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo shiweynahan furay ayaa adkeeyay dowrka Hay’adaha Amniga oo kaashanaya dadweynaha ay ka qaadan karaan amniga dalka guud ahaan iyo la dagaallanka argagixisada, isagoo madaxweynuhu ku boorriyay ka soo qaybgaleyaasha shirka inay talooyin wax ku ool ah ka soo saaraan shirkan.
Shirweynahan oo Saldhig u noqon doona dejinta istiraatiijiyadda guud ee amniga gudaha ee uu dalku yeelanayo iyo siyaasadaha cusub ee ay tahay in la raaco si dib u qaabayn iyo dib u dhis loogu sameeyo hay’adaha kala duwan ee amniga waxaa ka soo qeyb galay khubaro iyo xeeldheerayaal xagga amniga ah oo ka yimid dalka gudahiisa iyo dibaddaba waxaa kale oo shirkan ka soo qeyb galay ergooyin ka kala yimid dowlad goboleedyada iyo maamullada kala duwan sida: Puntland, Galmadug, Jubbaland, Ximan iyo xeeb, Banaadir, Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose, Bay, Bakool, Gedo, Jubbada Dhexe, Hiiraan iyo Galgaduud.
Shirweynaha waxaa kaloo ka soo qayb galay safiirrada iyo wakiillada wadammada caalamka u fadhiya Soomaaliya, urur-goboleedyo, Qarammada Midoobay, taliska ciidammada AMISOM iyo marti sharaf kale.
Waxaa shirweynaha soo gunaanaday Raysulwasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane C/weli Sheekh Axmed, isagoo u mahadnaqay ergadii iyo qabanqaabiyaashii shirweynaha, islamarkaana ballan qaaday iney xukuumaddu si buuxda u fulin doonto talooyinka kazoo baxay shirweynaha.
1. In shirweynaha ay ka soo baxaan talooyin wax ku ool ah oo ka qayb qaadan kara dejinta istiraatiijiyadda guud ee amniga gudaha.
2. U kuurgelidda iyo qiimaynta xaaladda amni ee uu ku sugan yahay dalku iyo kooxaha kala duwan ee caqabadda ku ah amniga dalka.
3. In la helo madal ay khubarada iyo xeeldheerayaasha amnigu isku weydaarsadaan xog iyo ra’yi, islamarkaana ay ku dhegeystaan bulshaweynta Soomaaliyeed.
4. Falanqaynta caqabadaha iyo fursadaha horyaal amniga gudaha iyo soo celinta kala danbaynta.
I. Dejinta Siyaasad iyo Sharci Haga Hay’adaha Amniga:
1. Shirweynuhu isagoo dareensan ahmiyadda xeerka la dagaallanka argagixisada
ee horyaal baarlamaanka, wuxuu u soo jeedinayaa Golaha Shacabka Soomaaliya in uu ansixiyo hindise sharciyeedkaas.
2. In dibuhabayn lagu sameeyo xeerarka iyo sharciyada ay ku dhisan yihiin hay’adaha amniga qaranka, si ay ula jaanqaadaan xaaladaha iyo isbedellada ka socda dalka.
3. In dibuhabayn lagu sameeyo sharciyada ay ku dhisan yihiin shirkadaha ilaalada gaarka loo leeyahay (private Security) iyo ka warhaynta maamulkooda.
4. In la dejiyo siyaasad guud iyo istiraatiijiyad ku qotonta baahida amni ee dalka islamarkaana la jaanqaadi karta isbadellada siyaasadeed.
5. In la sameeyo hab lagu aruuriyo laguna wadaago xogta dembiilayaasha iyo dembiyada abaabulan ee dalka ka dhaca.
II. Dibu- habeynta iyo Tayaynta Hay’adaha Amniga:
1. In xukuumaddu si dhab ah ugu dhiirrato dib-uhabayn ballaaran oo ay ku sameyso hab-dhismeedka, hogaanka, ciidan qoridda, xuquuqsiinta, dallacsiinta iyo daryeelka gaarka ah ee ciidammada amniga, wuxuuna shirweynuhu u arkaa in ciidammada oo hela xuquuqdooda ay aas-aas u tahay helidda ciidan si hufan u guta waajibkiisa.
2. In hay’adaha amnigu ay xil weyn iska saaraan tababarka, wacyigelinta iyo kor u qaadida dishibiliinka ciidanka, wuxuuna shirweynuhu u arkaa in askariga wanaagsani uu ka muhiimsan yahay qalabka iyo hubka uu sito.
3. In xukuumaddu ku dadaasho sidii ciidammada amnigu u heli lahaayeen qalabka, hubka, saanadda, gaadiidka, isgaarsiinta iyo agabka kale ee lama huraanka u ah shaqo-gudashadooda, laguna baahiyo dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka.
4. In hoggaaminta ciidammada amniga loo dhiibo saraakiil leh, aqoon, xirfad iyo daacadnimo oo hanan kara waajibaadka shaqo ee loo igmaday.
5. In qorista ciidammada kaalin weyn laga siiyo dhallinyarada waxbaratay iyadoo qaadashadooda lagu salaynayo shuruudo leh habraac cad.
6. Shirweynahu wuxuu u arkaa muhiim in qaabdhismeedka iyo tirada ciidammada dalka la waafajiyo awoodda dhaqaale ee dalka, iyadoo dhinaca kale la adeegsanayo xubno mutadawiciin ah iyo awoodda shacabka.
III. Xiriirka iyo Wadashaqaynta Ciidammada iyo Qaybaha Bulshada:
1. Shirweynuhu wuxuu lagama maarmaan u arkay in howlwadeennada amnigu ay xog wadaag toos ah la yeeshaan qaybaha bulshada ee kala duwan,si loo abuuro wadashaqayn iyo kalsooni buuxda oo dhexmarta hay’adaha amniga iyo qaybaha bulshada.
2. Shirweynuhu wuxuu u arkaa inay waajib tahay in warbaahintu ay si mug leh uga qayb qaadato baahinta amniga iyo xoojinta nidaamka iyo kala danbaynta,waxaana lagama maarmaan ah helista warbaahin mas’uul ah oo leh qawaaniin hagta.
3. Shirweynuhu wuxuu ku talinayaa in odoyaasha dhaqanka, culimaa’udiinka iyo ganacsatadu kaalin ballaaran ka qaataan soo celinta amniga dalka, kana fogaadaan u hiillinta dembiilayaasha.
4. Haweenka iyo dhallinyaradu waxay dowr muhiim ah ka qaadan karaan kor u qaadida amniga, waana in xukuumaddu dejisaa siyaasad iyo qorshayaal cad oo lagu hawl gelinayo qeybaha bulshada oo ay haweenka iyo dhallinyaradu u horreeyaan.
5. In si adag looga hortago si xun u adeegsiga awoodda ciidamada iyo ku xadgudubka xuquuqda aadanaha, lana dhowro xuquuqda muwaadiniinta.
6. In lala dagaallamo lana ciribtiro musuqmaasuqa, wax isdabamarinta iyo laaluushka halista ku ah fulinta hawlaha amniga, waana in la dhisaa xafiis u qaybsan hubinta hawshaas.
IV. Caddaaladda iyo Hay’adaha Amniga:
1. Shirweynuhu wuxu ku boorrinayaa hawlwadeennada garsoorka iyo hay’adaha amnigu inay yeeshaan iskaashi iyo wadashaqayn si loo xaqiijiyo fulinta caddaaladda.
2. Shirweynuhu wuxuu ku baaqayaa in xukuumaddu dardar geliso fulinta talooyinkii ka soo baxay shirweynihii caddaaladda iyo kii la dagaallanka xagjirnimada, taasoo ay ugu horrayso dibuhabaynta iyo tayaynta hay,adaha garsoorka.
V. Dhaqan Celinta iyo Hub-ka dhigista:
1. Shirweynuhu wuxuu soo jeedinayaa in dhallinyarada la marin habaabiyey loo sameeyo xannaano gaar ah, si ay uga soo kabtaan dhaawacyadii soo gaaray ee maskaxeed, jireed iyo niyadeed, dhallinyarada guud ahaanna la baro xirfado ay ku shaqaystaan si uga waantoobaan tahriibka, dembiyada abaabulan iyo ka mid ahaanshaha burcad-badeedka iyo kooxaha argagixisada.
2. Shirweynuhu wuxuu ku talinayaa in hubka faraha badan ee ku soo qulqulaya dalka iyo kan ku jira gacmaha dadweynaha uu ku khatar ku yahay amniga qaranka, lagama maarmaanna ay tahay in la dejiyo sharci iyo qorshe loo dhan yahay oo lagu xakameeyo haysashada iyo ka ganacsiga hubka.
3. In la helo qorshe guud oo hubka dhigis buuxda loogu samaynayo dalka oo dhan iyadoo loo marayo dibu heshiisiin iyo Isfahan.
4. In shaqo abuuris loo sameeyo dhallinyada waxbaratay iyo xoogsatadaba si looga hortago dembiyada, aysanna gacanta ugu gelin kooxaha dembiilayaasha ah.
VI. Xoojinta Xiriirka wada shaqaynta dowladda dhexe, dowlad- goboleedyada iyo maamullada:
1. Shirweynuhu wuxuu ku baaqayaa abuurista shuruuc iyo nidaam wadashaqayn kaasoo dhexmara dowlad goboleedyada, gobollada iyo dowladda dhexe, si loo xaqiijiyo ku baahinta Amniga dalka oo dhan.
2. Si loo hubiyo amni sugan oo waddanka oo dhan ah waa inay si buuxda isu kaashadaan dowlad goboleedyada, maamullada iyo hay,adaha dowladda dhexe iyadoo la midaynayo habka tababarka, xog-wadaagga iyo hawlgallada ciidammada amniga.
3. Hay’adaha amniga ee federaalka ahi waa inay ka qayb qaataan kobcinta tayada, qalabka iyo dhaqaalaha ciidammada amniga ee gobollada.
VII. BAAQA SHIRWEYNAHA:
 Shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay adkeeyaan midnimadooda iyo wadajirkooda meelna uga soo wada jeestaan xoojinta amniga iyo gacan siinta hay’adaha ku hawlan.
 Shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dhammaan dhallinyarada iyo kooxaha hubaysan inay hubka dhigaan, kana faaiideystaan cafiskii dowladdu u fidisay kana midnoqdaan shacabkooda.
 Shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladaha deriska ah inay u arkaan degenaanshaha Soomaaliya inuu ahmiyad weyn u leeyahay xasilloonida gobolka, sidaa daraadeedna ay lama huraan tahay inay ku garab istaagaan dowladda Soomaaliya nabad ku soo dabbaalidda dalka, islamarkaana la helo iskaashi iyo wadashaqayn.
 Shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa beesha caalamka inay ka dhabayso ballanqaadyadii ay horey u gashay ayna gacan buuxda ku siiyaan dhismaha hay’adaha amniga iyo dhameystirka baahiyadooda kala duwan.
Ugu dambayntii waxaa mahad ballaaran loo jeedinayaa:
 Qabanqaabiyeyaasha shirweynaha oo suurtal ka dhigay in la helo madal Soomaaliyeed oo looga hadlo amniga laguna falanqeeyo.
 Ka qaybgaleyaasha shirka.
 Ciidammada amniga Soomaaliyeed kuwaasoo had iyo jeer u heellan inay naftooda u huraan bad-baadada dalka, dadka iyo diintaba.
 Sidoo kale wuxuu shirweynuhu u mahadcelinayaa ciidammada AMISOM oo qayb ka qaatay sugidda amniga.
 Iyo dhammaan intii gacan ka geysatey hirgelinta shirkan.